Ukushaja yesikole kuyinto umsebenzi oyimpoqo ngoba esikoleni samabanga aphansi izingane hhayi ejwayele kokuchitha isikhathi esiningi edeskini. emgogodleni zazo nezihlanganiso Kuphakathi kusanesiminyaminya noma ibekwe ngokungalungile, lapho abanokukhubazeka ezahlukene zenzeka. Futhi ukushaja ukusiza babhekane nalesi isishayo ungcono zonke ezinye izindlela.
Ukuqinisa emuva imisipha - isihluthulelo isimo lesifanele!
Njengoba umkhuba ubonisa, ngemva izifundo 2-3 abafundi baqale ukuphasa ikhanda ngezandla, futhi kulokhu, yebo, abahlukaniswe emgogodleni isikhundla. Ngaphezu kwalokho, akuvamile uzobheka ukubona ukuthi imilenze zitholakala. Ngenxa yalokho, ukukhokhiswa zesikole kufanele bazilungiselela wokuqala nomkhulu kunabo bonke ukuqinisekisa ukuthi ukuqinisa emuva imisipha. Uma umzimba ezahlukene oyokwenziwa ngokuqhubekayo, ngisho nakuba owayesekhokhoba isikhundla edeskini ukuze Ezifundweni ezimbalwa hhayi zibulale indlela omi ngayo.
Indlela kuthakazelise ingane ukwenza izivivinyo?
Kuwufanele bethi owayesekhokhoba ukuma ukulungiswa ngeke kube nje nzima ukufeza, kodwa futhi inqubo ende futhi kuyabiza. Kodwa njengoba umthetho, achazele ingane ukuthi akunakwenzeka. Ngakho-ke, abazali baye amaqhinga ahlukahlukene ukuze ufundise izingane zakho ukuzivocavoca. Ngokuvamile uma ishaja kuyaqhubeka abafundi, omama nobaba ongcono ukufundisa zonke amakilasi ngendlela playful. Khona-ke ingane bayokujabulela ukwenza zonke izivivinyo, nokuma komzimba yayo ngeke siphile.
Inxanxathela ekuseni umsebenzi zesikole
Nginikeze ibhola kumelwe Sime kanye ingane babhekane, bese ukugoba ngesikhathi esifanayo, wedlula ibhola. Kulokhu, imilenze kanye emuva okufanele kuqonde. Ukuzivocavoca wenziwa amasede amabili izikhathi 10, kuqala ngejubane kancane, bese - ku okusheshayo.
Umntwana amanga isisu sakhe futhi iqala ukuthi siphakamise izingalo nemilenze up. Umzali ngesikhathi esifanayo kuyasiza. Ukuhanjiswa uphela izandla nezinyawo futhi ebenza esimweni bengekho ngaphezu kwama-15 imizuzwana.
kubhasikidi omncane Ingane itholakala esiswini sakhe, nemengamo umzimba zakhe futhi ezama ukufinyelela ngezandla nezinyawo. Njengoba sazi ukuthi izingane ezincane yobudala ikhululekile, abazali kudingeka ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wenziwa kancane futhi ngokushelela.
ringlet Ingane itholakala esiswini sakhe, khona-ke nemengamo umzimba wakhe ngendlela efanayo njengoba ekusebenziseni odlule. Kodwa manje anakho ukufinyelela ikhanda ezinyaweni, amasokisi ngesikhathi esifanayo enwetshiwe. Abazali kufanele esihlelwe baby at isikhathi sokusebenza.
inyoka Ingane itholakala esiswini sakhe, khona-ke nemengamo emuva kwakhe, uhlezi izingalo zakhe eyeluliweyo phansi. Kulokhu, ukhalo kumele ngokuqinile bezama phansi, bese ubuka ukuthi abazali.
butterfly Ingane ihlala phezulu ngazo imilenze ukuze uthinte izinyawo. Abazali isikhathi sokusebenza kahle futhi ngobumnene ucindezela emadolweni, ukuze uthinte phansi. Lokhu kwenziwa sengathi entwasahlobo kusezandleni zakho.
swing Ingane itholakala emhlane wakhe, uyawavala izandla zakhe ngemuva ekhanda lakhe ukuguqa yakho. umsebenzi inselele iwukuba kanyekanye donsa ikhanda nezinyawo ndawonye. Abazali kulokhu ukusekela ingane, ngakho-ke akuveli yagingqika ohlangothini lwakhe.
izimo engeziwe ngoba umgogodla bushelelezi
Ukuze ukushaja yesikole ukuletha izinzuzo ezengeziwe, abazali kufanele sinake isimo lapho ingane ehilelekile. Kuyinto efiselekayo ukuthi emuva yayo eyakhelene ngemuva kwesitulo, umthwalo phezu emgogodleni ke kuzoncishiswa. Ngaphezu kwalokho, kutuswa iyakwenqabela kid ubeke imilenze yakhe lapho ehlezi etafuleni lakhe. Uma konke lokhu imithetho, ugobile yomgogodla akusho zisongele ingane.
Ngakho, i ekahle ekuseni icala zesikole iqoqo umzimba ukuze kwenziwe ngesimo umdlalo. Ukuze ukuphelela, kubalulekile ukwenza abazali kuzoqinisekisa ukuthi isimo lapho ingane yenza umsebenzi wesikole.